Ufuna Ukukhipha Imininingwane? Izinsizakalo eziyishumi eziwusizo ze-Web Scraping Kumelwe uzame Ngokusho kokumisa
I-Web scraping iyinkambinkimbi eyinkimbinkimbi eyenziwe ngamathuluzi amaningi 7). Lawa mathuluzi asebenzisana namawebhusayithi ahlukahlukene ngendlela efanayo nangokwenzayo uma usebenzisa isiphequluli efana ne-Firefox noma i-Chrome. Ngaphezu kwalokho, izinhlelo ze-web scraping zibonisa idatha ekhishwe ngendlela efomethiwe. Basiza ukukhiqiza ukuhola okuningi futhi bathole amabhizinisi ethu okuhle kakhulu.
Ama-Web Best Scraping Tools
Lapha sinikeze uhlu lwamathuluzi wokuhlunga amawebhusayithi awusizo futhi awusizo, amanye awo akhululekile ngenkathi amanye ekhokhwa.
1 - empresas existentes. Ngenisa. Io
Ngenisa. Io idume ngobuchwepheshe bayo obuphambili. Ithuluzi lifanelekela ochwepheshe nabangewona ochwepheshe. Leli thuluzi lokukhwabanisa lewebhu alitholi kuphela ukufinyelela futhi lishaye inani elikhulu lamawebhusayithi kodwa futhi lithumela idatha ekhishwe ku-CSV. Amakhulu kuya kwamakhulu wamakhasi kanye namafayela e-PDF angahlungwa ngaphakathi kwehora ne-Ngenisa. io. Iphuzu le-plus plus ukuthi awudingi ukubhala noma iyiphi ikhodi. Esikhundleni salokho, leli thuluzi lakha ama-API angaphezu kuka-1000 ngokuya ngezidingo zakho.
Dexi. Io ibizwa nangokuthi i-CloudScrape. Lolu hlelo lokuklabhula iwebhu nolwazi lokukhipha idatha lufanelekela kubahleli nabazimele. Kuyaziwa kakhulu ngokulandelwayo nomhleli walo wesiphequluli okwenze kube lula kuwe ukufinyelela nokulanda idatha ekhishwe ku-hard drive yakho. Futhi, lokhu kuyi-crawler enkulu ye-web engasindisa idatha kwi-Box. inetha noma i-Google Drayivu. Ungathumela futhi idatha yakho ku-CSV ne-JSON.
3. I-Webhouse. Io
I-Webhouse. Io ingenye yezinhlelo zokusebenza zokusula zewebhu ezisezingeni elimangalisayo futhi elimangalisayo. Inikeza ukufinyelela okulula nokuqondile kwedatha ehlelekile futhi unamandla okukhomba izinombolo ezinkulu zamakhasi wewebhu ku-API eyodwa. Ungakwazi kalula ukukhipha idatha yakho usebenzisa i-Webhouse. Io futhi ulondoloze emafomethi afana ne-RSS, i-XML, ne-JSON.
NgamaRandi angu-25 kuphela ngenyanga, ungakwazi ukufinyelela zonke izici ezimangalisayo ze-Scrapinghub. Lena isicelo esisekelwe efwini esifeza izidingo zakho zokukhipha idatha ngendlela engcono. I-Scrapinghub iyaziwa kakhulu nge-rotator yayo ye-proxy ehambayo ehamba ngamawebhusayithi evikelekile we-bot kalula.
5. I-Visual Scraper
I-Visual Scraper yilezi ezinye izizinda zedatha kanye nokuhlelwa kwemayini yokuqukethwe. Ithola ulwazi kusuka kumawebhusayithi ahlukahlukene, futhi imiphumela ilandelwa ngesikhathi sangempela. Ungathumela idatha yakho ekhishwe kumafomethi afana ne-SQL, i-JSON, i-XML, ne-CSV.
6. I-Outwit Hub
Yengeza okungeziwe nge-Firefox okungenza kube lula ukusesha kwethu kuwebhu ngenxa yezinto zayo zokukhishwa kwedatha. I-Out Hub Hub idume ngokulinganayo phakathi kwabahleli nabakhi bewebhu; leli thuluzi ligcina idatha yakho emafomethi afanelekayo futhi ahlakisayo, enikeza isikhombimsebenzisi esibonakalayo somsebenzisi nezinsizakalo ezingcono kakhulu.
Kuyiqiniso ukuthi i-Scraper inomkhawulo wezinto zokukhipha idatha, kodwa lokho akusho ukuthi ngeke kwenziwe ukucwaninga kwakho oku-intanethi kube lula. Eqinisweni, i-Scraper yiyona yokuqala yokukhetha amabhizinisi ahlukahlukene, ochwepheshe be-SEO, nabathuthukisi bezinhlelo zokusebenza. Ungakopisha idatha ebhodini lokunamathisela noma ulondoloze kuma-spreadsheet ahlukene njengesifiso sakho. Ngeshwa, leli thuluzi alikhazi amakhasi akho wewebhu.
8. Imilenze engu-80
Yisicelo sokuhlunga iwebhu esiphezulu, esinemibandela, futhi ewusizo. Ungalungisa imilenze engu-80 ngokwezidingo zakho, futhi leli thuluzi lithatha imininingwane edingekayo ngemizuzwana embalwa.
I-Spinn3r ifaka idatha kusuka kuwebhusayithi yonke, amanethiwekhi omphakathi wezokuxhumana, izitolo zezindaba kanye namabhulogi angasese, kulondoloza idatha yakho kufomethi ye-JSON. Ngaphandle kwempahla yayo emangalisayo yokukhipha idatha, i-Spinn3r iqinisekisa ukuphepha nokuyimfihlo yedatha yakho futhi ungavumeli abakwa-spammers bayabe.